XIRFAD LEH OO HUBSAN TAYO, ADEEGGA AYAA HORUMARINAYA HORUMAR.
Kaarka Xannibaadda RFID / Kaarka Gaashaanka waa cabbirka kaarka deynta oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo macluumaadka shakhsiyeed ee ku kaydsan kaararka deynta, kaararka debit, kaararka casriga ah, shatiyada darawalnimada ee RFID iyo kaararka kale ee RFID ee tuugada elektarooniga ah ee elektaroonigga ah ee adeegsanaya qalabka wax lagu baaro ee RFID.
Waa maxay Kaarka Xannibaadda / Gaashaanka RFID?
Sidee ayuu u shaqeeyaa RFID Blocking / Card Shield?
Kaarka Xannibaadda RFID wuxuu ka kooban yahay guddi goobeed oo khalkhal geliya sawir-qaadaha inuu akhriyo calaamadaha RFID. Waxaa jira daahan gudaha iyo gudaha ah oo aan adkeyn, sidaas darteed kaarku aad ayuu u jilicsan yahay.
Hayso Xogtaada Amaan
"Iyadoo la adeegsanayo Kaararka Xakamaynta RFID gudaha guddi wareeg ah, waxaad hubin kartaa in lambarrada kaararkaaga, cinwaankaaga, iyo macluumaadka kale ee muhiimka ah ee shakhsiyadeed ay ka badbaadi karaan qalabka iskaan-qaadista Aqoonsiga Mowjadaha Raadiyaha (RFID) ee u dhow.
Kaarka xayiraya / kaarka gaashaanku uma baahna batteri. Waxay ka soo qaadataa tamarta iskaanka inay kor u kacdo isla markaaba waxay abuurtaa E-Field, goob elektaroonig ah oo hareeraheeda ka dhigeysa dhamaan kaararka 13.56mhz oo aan lagu arki karin qalabka iskaanku. Mar haddii qalabka iskaanku ka baxsan yahay kaarka xanibaada / kaarka gaashaanka de-awoodaha.
Si fudud ku qaado kaarka xannibista / kaarka gaashaanka ee ku jira boorsadaada iyo guntiga lacagta oo dhammaan kaararka 13.56mhz ee ku dhex jira E-Field-ka ayaa la ilaalin doonaa
Waxyaabaha PVC + moduleka xannibaya ama PVC + Dharka Xannibaadda
Cabir CR80-85.5mm * 54mm
Dhumucdiisuna 0.86mm, 1.2mm, 1.5mm
Oogada Dhaldhalaalaan / Matted / Qabow
Daabacaadda Daabacaadda xariirta, daabacaadda CMYK, 100% midab macaamil ah oo u dhigma
Xirxirida Jumlo ama Khariidad ama kartoon hadiyad ah
MOQ Maya MOQ haddii aysan jirin daabacaad gaar ah.
50pcs haddii ay u baahan yihiin daabac calaamadda / naqshadeynta macaamiisha
Codsiga Wuxuu ilaaliyaa xogta baasaboorka / kaarka, JOOJI xatooyada RFID
Astaamaha Abaalmarinta ku guuleysiga moduleka xannibaadda RFID / sheyga gudaha
Hal ama laba kaarka xannibista ah ku rid boorsada jeebka, ka dibna dhammaan kaararka rfid / kaarka bangiga ee xogta la ilaaliyo.
Codsiyada Ilaali macluumaadka shakhsiga ah ee kaarka amaahda, Baasaboorka, kaarka aqoonsiga, iwm.
Hore: Xubin / Kaar Ganacsi
Xiga: Gacmo xirista RFID
Dahaarka Rfid Blocking
Waxyaabaha Rfid Blocking
Nidaamka Xanibaada Rfid
Kaarka mashruuca warshadaha RFID
OME Desktop 1d 2d Supermarket Pos Mac oo aan gacanta ku haynin ...
Supermarkt Taageerada PDA QR Code Scanner Industri ...
Cordless Hand qabtay Bar Code Android Scanners Fo ...
Taayirada RFID taayirka